रौतहटमा थप ४० जना संक्रमण मुक्त - ७ असार २०७७, NepalTimes
रौतहटमा थप ४० जना संक्रमण मुक्त
७ असार, रौतहट ।
रौतहटमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएपछि शनिबार साँझ थप ४० जना घर फर्किएका छन् ।
योसँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या ३ सय ७२ पुगेको छ । जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या भने १ हजार ९४ जना पुगेको छ । ति मध्ये अहिले पनि ७ सय २२ जनाको विभिन्न स्थानमा रहेको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ ।
गौर नगरपालिकाको गौर नसिङ्ग इन्स्टिच्युटको आइसोलेनबाट विभिन्न नगरपालीकाका ३९ जना पुरुष र १ जना महिला संक्रमण निको भएर घर फर्केको जिल्ला अस्पताल गौरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. कृष्ण साहले बताए । घर फर्केनेमा २ जना बालबालिका पनि छन् । उनीहरुमा संक्रमण भने थिएन ।
अभिभावकबाट अलग राख्न नसक्ने भएकाले सँगै आइसोलेसनमा राखिएको डा. साहले बताए । बालबालीकाको पनि पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज गरिएका ४० जनाको हेंटौडास्थित प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो ।
त्यहाँ रहेका सबै घर फर्किपछि आइसोलेसन खाली भएको छ । दुई दिन अघि जिल्लाको परोहा नगरपालिकाले स्थापना गरेको आइसोलेसन बसेका ६१ जना र राजपुरमा रहेको आइसोलेसनबाट ७६ जना संक्रमित निको भएर घर फर्केका थिए । उनीहरुको पीसीआर परीक्षणको पछिल्लो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर पठाइएको हो ।
जिल्लाको गरुडा नगरपालिकामा रहेको प्रहरी विद्यालयको आइसोलेसनबाट १ सय १० संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन् । अहिले विभिन्न क्वारेन्टाइनहरुमा १ हजार ९ सयलाई राखिको छ । उनीहरुको स्वाबको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासनका सुब्बा रामनरेश साहले बताए ।